Ahoana no ahafantarako ny fametrahana version FSX ao amin'ny solosainako? FSX-SP1, SP2 na Acceleration? - Rikoooo
Ahoana no ahafahako mahafantatra izay FSX dikan no nametraka eo amin'ny solosaina? FSX-SP1, SP2 na haingana?
Ny hahafantatra izay dikan-FSX dia nametraka amin'ny solosaina, mora: Start FSX, ka hanomboka ny fiaramanidina na aiza na aiza tianao, akory va fiaramanidina tianao. Ankehitriny, eo amin'ny tampon'ny ny efijery, sokafy ny sakafo fisotroana (raha tsy efa nisokatra) ary tsindrio eo amin'ny «Help» ho amin'ny tsara. Eto, tsindrio eo amin'ny «About». Manaraka varavarankely hita amin'ny dikan-FSX: